ရန်ကုန်မြို့ပြရဲ့ ခေတ်သစ် သီတင်းကျွတ်ည | ဧရာဝတီ
မေရီကို| October 30, 2012 | Hits:11,529
17 | | သီတင်းကျွတ်ည ရွှေတိဂုံစေတီတော်ရင်ပြင် မြင်ကွင်းတခု (ဓာတ်ပုံ – theglobeandmail.com)
4 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website phoephoe October 30, 2012 - 6:50 pm	i fell pleased as i’ve read these news.lets go on.
Reply	FOX October 31, 2012 - 10:10 am	ဒါကနိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တယ်လုို့မြင်ပါတယ်….သီတင်းကျွတ်အတွက်ကိုသီးသီးသန့်သန့်လေးအလုပ်ပိတ်ရက်ကလေးလုပ်ပေးလိုက်ရင် လူငယ်တွေ၊ အလုပ်လုပ်သူတွေအတွက် သီတင်းကျွတ်ဘက်ကိုအာရုံလှည့်လာနိုင်စရာရှိမယ်လို့မြင်မိပါတယ်…
Reply	CAT October 31, 2012 - 11:56 pm	ဦးဘဂျမ်းကာတွန်းပြပွဲက တန်ဆောင်တိုင်မှာ သူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ ၁၃ လမ်းမှာကျင်းပတာပါ။
Reply	kopouk. November 9, 2012 - 10:35 am	မြန်မာ့၇ိုး၇ာ သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော ဟာ ၇န်ကုန်မြို့မှာတော့ တဖြေးဖြေးတိမ်ကောလို့လာပါပြီ.၇န်ုကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ မြန်မာလူမျိုး သုံးပုံနှစ်ပုံခ့န့်ဟာ စား ၀တ် နေေ၇း သံသယာ ၀ဲသြဃ ထဲမှာ နစ်မြုတ်လို့ နေ ကြပါတယ်.တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စား၇ တဲ့ ဘ၀ကနေ ၇ုန်းမထွက်နိုင်တော့ကာ ၇ုိး၇ာအစဉ်အလာ တွေကို သိပေမဲ့ လုပ်ုဖို့၇ာကြတော့ အပိုငွေကြေး ကမတတ်နိုင်ကြတော့ဘူး.ငွေကြေးတတ်နိုင်ကြတဲ့ ဗမာဗုဒ္ဒဘာသာဝင် တစ်ချို့ ကလည်း မိ၇ိုးဖလာ ၇ိုး၇ာပွဲတော်မျိုး ကျင်းပဘို့မဆိုထားနဲ့ ကိုယ့်အိမ်မှာတောင် ဆီမီးထွန်းတဲ့ အလေ့အထက နဲလာနေလိုက်တာ မျိုးဆက် တစ်ဆက် မကတော့ဘူး.တိုင်းတစ်ပါး၇ဲ့ယာဉ်ကျေးမှုကိုသာ အတုယူ အားကြနေကြကုန်လေ၇ဲ့.အင်း တစ်ခုကောင်းတာကတော့ ၇န်ကုန်မှာ မီးထွန်းပွဲတော် ကျင်းပတဲ့ ပွဲတွေ အစား လမ်းတိုင်း ၇ပ်ကွက်တိုင်း တပိုင်တနုိုင် တ၇ားပွဲတွေ ကျင်းပလာနေကြတာကို တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ပို သိသာထင်၇ှားလို့ လာနေတယ်လေ.
ဒါကို ကျွန်တော့ အနေနဲ့ကတော့ အမြဲ၈ုဏ်ယူလျက်ပါ.
ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်များ ပျောက်ပျက်မည်ကို ပုဂံဒေသခံများ စိုးရိမ်
ပန်းချီကေမိုးကိုရဲ့ “ကျနော့်ခံစားမှု၊ ကျနော့် အနုပညာ”